तपाईंको प्रायः सोधिएको एसईओ प्रश्नहरूको द्रुत जवाफहरू
SERP मा तपाईंको साइटलाई दृश्यात्मक बनाउनको लागी, तपाईले खोज इन्जिन अप्टिमाइजेशन सर्त परिभाषा भन्दा केहि थाहा पाउनु हुन्छ र यो तपाईको रैंकिङ कसरी प्रभाव पार्न सक्छ।. विजेता अप्टिमाइजेसन अभियान बनाउन वा एसईओ विशेषज्ञहरु को काम को निगरानी को लागी, तपाईंलाई वेबसाइट को अनुकूलन सिद्धान्तहरु र प्रविधिहरु को बारे मा गहिरो ज्ञान प्राप्त गर्न आवश्यक छ. त्यसोभए हामीलाई आवश्यक एसईओ चीजहरूको बारेमा कुरा गरौं कि धेरै शुरुआती वेबसाइटहरू वेबसाइटको विकासको बारेमा प्रश्नहरू छन् तर निश्चय गर्दैन कि स्पष्टीकरणका लागि सोध्न चाहानुहुन्छ।.
जैविक र सशुल्क खोज को बीच को फरक के छ?
पाईस वा अकार्बनिक सर्च नतिजाहरू ती SERP पृष्ठको शीर्षमा देखा पर्ने र मार्क छ "विज्ञापनहरू. "केहि अवस्थामा, यी नतिजाहरु SERP पृष्ठको छेउमा पनि देखा पर्न सक्छ. यी डोमेनहरू छन् कि विज्ञापनदाताहरूले प्रासंगिक प्रयोगकर्ताको प्रश्नहरूको लागि विभिन्न खोजी इञ्जिनको शीर्षमा देखा पर्दछन् - rival casino no deposit 2016. सशुल्क खोजीमा प्राप्त गर्न, तपाईंलाई अनुकूलन अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छैन. तपाइँलाई आवश्यक सबै कुरा तपाईंको विज्ञापनमा प्रत्येक प्रयोगकर्ताको क्लिकको लागि भुक्तानी हो. यस प्रकारका भुक्तानी विज्ञापनलाई भुक्तानी-प्रति-क्लिक विज्ञापन भनिन्छ र खोजीबाट नयाँ आगन्तुकहरू आकर्षित गर्न र क्लिक-मार्फत दर बढाउन प्रयोग गरिन्छ.
जैविक वा गैर-सशुल्क खोज जैविक नतिजाहरुलाई बुझाउँछ जुन खोज इन्जिनहरूमा गुणस्तर वेबसाइट अप्टिमाइजेसन मार्फत देखा पर्दछ।. जैविक खोज को शीर्ष मा राखिएको वेब स्रोत यसको प्रासंगिकता, गुणस्तर, र एसईओ मित्रतागतता द्वारा प्रतिष्ठित हुन सक्छ।. एक शीर्ष स्थान वेबसाइट वेबसाइट को सबै खोज इन्जिन मानकहरु को अनुसार विकसित गरिनु पर्छ. जैविक खोज मा अग्रणी गरेर, तपाईं आफ्नो ब्रान्ड जागरूकता को सुधार गर्न को लागि आफ्नो संभावनाहरु लाई बढावा दिन को गुणवत्ता यातायात को आकर्षित गर्न को लागि बिक्री मा परिवर्तित हुनेछ.
एसईओ सेवाहरूको लागि मैले कति तिर्नुपर्छ?
खोज इन्जिन अनुकूलन सेवाहरु मूल्य तपाईंको व्यापार को प्रकार को अनुसार नाटकीय रूप देखि फरक हुन सक्छ, तपाईंको बजार आला र अनुकूलन को आकार (स्थानीय, देश, वैश्विक). यसको अतिरिक्त, एक मूल्य अनुकूलन सेवा प्रदाता प्राधिकरण र प्रतिष्ठा मा निर्भर गर्दछ. यदि यो एक लामो समयसम्म चल्ने राम्रो संसारमा विश्वव्यापी डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सीको रूपमा चिनिन्छ भने, सम्भवतः उनीहरूको सेवाहरूको लागत औसत बजार मूल्य भन्दा अधिक हुनेछ।. यद्यपि, तपाईका सबै लगानीहरू स्पेसहरूमा भुक्तानी गरिनेछ. यही कारण तपाईं गुणस्तर अनुकूलन अभियान मूल्यको बारे मा शंकास्पद हुन हुँदैन.
कम्पनीहरू जसले एसईओ धेरै किफायती मूल्यहरूमा प्रस्ताव गर्नका लागी नपराउनुहोस्. अधिकांश अवस्थामा, त्यहाँ असामान्य दृष्टिकोण र यसको पछि लागी धोका छ. प्राय: यी कम्पनीहरूले द्रुत-टोपी एसईओ प्रविधिहरूलाई छिटो परिणाम प्राप्त गर्न प्रयोग गर्दछ. तथापि, यो Google दण्ड र रैंकिङ कम हुन्छ.
एक पटक मैले एसईओ सुरू गरे, मैले पहिलो सकारात्मक नतिजा जाँच गर्न कति पटक पर्खनु पर्छ?
SEO एक समय-उपभोग प्रक्रिया हो जुन समय र प्रयासको आवश्यकता छ. यो रातभर लागु गर्न सकिँदैन. सबै संशोधन एसईओ रणनीतिहरू र धेरै महिनाहरू लागू गर्नका लागि सबै संशोधनहरू अद्यावधिक मार्फत समर्पित भएपछि6देखि9हप्ता सम्म लाग्छ. खोजी ईन्जिन क्रेलरहरू केहि समय चाहिन्छ जुन पार्स गर्न र तपाईंको वेबसाइट परिवर्तनहरू तपाईँको साइट SERP मा उच्च स्थितिमा प्राप्त गर्न सूचकांक गर्न. तपाईंको बजार आविष्कारको आधारमा, आकारको अनुकूलन र साइजको गुणस्तरमा, यो पहिलो सकारात्मक एसईओ नतिजा हेर्न सुरु गर्न6देखि9महिना लाग्छ.